Crystal Skye joins Crystal AirCruises fleet | Airline News
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeenqwelo moya » UCrystal Skye ujoyina i-Crystal AirCruises yeenqanawa
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zokuhamba zeAruba • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zoMsebenzi woHamba • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Amathuba otyalo-mali • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zokuHamba • Iindaba ze-USA
UCrystal Skye ujoyina i-Crystal AirCruises yeenqanawa
Namhlanje, iCrystal AirCruises yamkele elona lungu litsha lezithuthi zayo ezandayo, uCrystal Skye, ngexesha lomsitho wokunikezelwa ngokusesikweni obubanjelwe eBoeing Field eSeattle, Washington. I-Boeing 777-200LR enxibe kakuhle yanikezelwa kwi-CEO ye-Crystal kunye nomongameli, u-Edie Rodriguez ovela eGreenpoint Technologies. ICrystal Skye yeyona jet inkulu yabucala emhlabeni kwaye isetyenziselwa inkonzo eqeshiweyo, ihlala namanye amaqela abonisa ubuhlanga kunye nabahambi. UCrystal Skye uza kubhaptizwa eLas Vegas nge-12 ka-Agasti.
"Siyavuya ukwamkela uCrystal Skye kusapho, njengoko ephawula ukuqala kwesahluko esitsha kunye nommandla wokuhamba kamnandi kubakhenkethi abafuna amava angenakulinganiswa eCrystal," utshilo uRodriguez. "Njengokuba siqala amatheko amatsha ehlabathi kunye noCrystal Skye, sikhuthazekile ngumbono ekwabelwana ngawo weengcali zethu kunye nezo zeGreenpoint Technologies, ezizise eli phupha liphezulu."
Ngoyilo oluphangaleleyo ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezingama-88, uCrystal Skye wonyulwa ngeempawu ezinqabileyo ezifumaneka nakwezona jets zabucala zintle. Unabasebenzi abaphezulu kumyinge wabahambi kuyo nayiphi na inqwelo moya yamawele kunye nohlobo olungapheliyo lweeyure eziyi-19.5, evumela abahambi ukuba bahlole iindawo ezikude zomhlaba ngelixa bonwabele inkonzo elungiselelwe wena i-Crystal eyaziwayo kwihlabathi liphela. Izihlalo zeBespoke Crystal Exclusive Class ™ ziyilelwe indawo ephezulu yomntu kunye nokuthuthuzelwa kwe-ergonomic, kwaye ziguqulela kwi-180-degree-lie-flat bed. Indawo yokuphumla eyandisiweyo enebha yokuma ikhuthaza ulwalamano oluhle phakathi kwabahambi bonwabile. I-Cuisine iyakulungiswa ngumpheki ophetheyo, kwizikhephe ezibini zikwimeko entle kwaye zidityaniswe noluhlu lweewayini eziphambili ezivela kwiCrystal SkyeCellar.
ICrystal ibambisene neGreenpoint Technologies kuphuhliso olukhethekileyo lweCrystal Skye, njengoko inkampani idume ngobuchule bayo kunye nobunkokeli ekudaleni uyilo lwenqwelomoya oluphezulu. IGreenpoint Technologies isebenze kunye neengcali zikaCrystal ukukhulelwa umgangatho wokugqwesa kunye nokunethezeka okufunekayo ukuqinisekisa amava olundwendwe angenakuthelekiswa nanto kwinqanawa yeCrystal, emva koko yazisa umbono. Ukufakwa kwangaphakathi kweCrystal Skye kwaqala ngo-Agasti ka-2016 kwiziko laseGreenpoint eMoses Lake eWashington, kugxilwe kwizinto ezinje ngegumbi lokuhlala elinama-24 elinebar esembindini, iisofa, iisilingi ezigqunywe ngesiko, eyona cellar inkulu esibhakabhakeni nendawo eyaneleyo ukunxulumana. I-veneers yamatye, ukukhanya kwe-LED enemibala kunye nezinye iinkcukacha zepremiyamu zihombisa ingaphakathi elingaqhelekanga.
UBret Neely, uSekela Mongameli oLawulayo eGreenpoint Technologies uthi, “Injongo yethu kule nkqubo yayikukudala indawo yangaphakathi ebukekayo ebonisa uphawu oluhle lweCrystal ngokuseka iinqanawa zabo zokuhamba, izikhephe nezikhephe. IGreenpoint yinkampani eyakhiwe ngokuBambisana. Zombini ngaphakathi nangaphandle kunye nabathengi bethu. Kwakumangalisa ukubona iqela eliphambili lidibene ukuze liqwalasele amava eendwendwe zikaCrystal, okukhokelela kubuhle obusebenzayo obusebenzayo namhlanje. ”
IBoeing 777 Crystal Skye isebenza ngeCrystal AirCruises yiComlux Aruba NV.